Ndị a bụ ụfọdụ ọdọ mmiri ndị dị nso na Madrid | Akụkọ Njem
Carmen Guillen | | Spain obodo, Madrid
Ndị anyị si obodo gbara osimiri okirikiriMgbe ụfọdụ anyị anaghị ama maka etu anyị siri nwee isi oke osimiri n’akụkụ, ebe anyị bi. Madrilenians enweghị na chioma ma ha nwere usoro nke dams, swamps na ọdọ mmiri nkịtị dị nnọọ nso na obodo ebe gị na ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị ga-anọrịrị ma wee tufuo ikpo ọkụ ahụ na-akụda isi obodo Spanish site na mmiri.
Ọ bụrụ na ị si na Madrid, n'ezie ịmara ọdọ mmiri ndị a, mana ọ bụrụ na ịkwaga n'isi obodo n'oge na-adịbeghị anya Ma ọ bụ ị na-eme atụmatụ ime ya na ọnwa ole na ole sochirinụ ma ị maghị ebe akụkụ ndị a dị ebube nke okike dị, ebe a ka anyị ga-agwa gị. Ọzọ, anyị na-agwa gị ihe bụ ụfọdụ ọdọ mmiri dị n'akụkụ Madrid ị nwere ike ịchọta. Achọla oge ị ga-enye ume ọhụrụ n'ụbọchị wee kwụsị otu n'ime ha. A kwadebere ha nke ọma ma enwere ikuku dị mma.
1 Rascafría ọdọ mmiri
2 Ọdọ mmiri mmiri Cercedilla
3 Apiti nke San Juan
4 Ọdọ mmiri Riosequillo
Rascafría ọdọ mmiri
A na-ahụ ọdọ mmiri ndị dị na Rascafría na Ndagwurugwu Paular. Ha mmiri nwa kristal ma ezigbo oyiN'ihi ya aha ya, yabụ imikpu n'ime ha ruo ogologo oge nwere ike ịbụ ọrụ na-agaghị ekwe omume. Kpọmkwem, n'ebe anyị ga-ahụ ngụkọta nke ọdọ mmiri atọ, nke dị na ọwa nke osimiri Lozoya, yana a nnukwu ebe ahịhịa ndụ juru ka ha nọrọ ọdụ nke ọma ma ọ bụ dinara ha. Mpaghara a na-enye ohere ntụrụndụ na ụlọ nke ndị ezinụlọ na ndị enyi. Ọ bụ ebe a na-atụ aro maka obere ụlọ na anyị nwekwara ike ịchọta tebụl, ụlọ mposi, bins ịhapụ ihe niile dị ọcha na ọbụna kiosks...
La ntinye na ọdọ mmiri nkịtị nke Rascafría bụ n'efu na n'efuAnyị ga-akwụ ụgwọ naanị maka ebe ha na-adọba ụgbọala nke na-efu ihe dịka euro 5 maka ụbọchị zuru ezu. Ya oge usoro Ọ na - amalite n’elekere itoolu nke ụtụtụ ruo elekere iri nke ụtụtụ wee mepee kwa ụbọchị n’oge ọnwa ọkọchị.
Ọdọ mmiri mmiri Cercedilla
Osimiri ọdọ mmiri Cercedilla bụ nhọrọ ọzọ mara mma iji dọọ oyi mgbe okpomoku dị. Ọ bụrụ na ị bụghị onye Madrid, ị kwesịrị ịma na ịnwere ike ịchọta ha na Ndagwurugwu Fuenfría, n'ime ọchịchị obodo nke Cercedilla na-esote ụfọdụ fodụrụ nke fọdụrụ n'okporo ụzọ Rom ochie.
A na-akpọ ha ọtụtụ ndị Las Dehesas ọdọ mmiri nkịtị wee pụọ kere na 1978 ya na oke mmiri. Ugbu a, a ghaghị iji chlorine gwọọ ha maka ezigbo ọnọdụ na nchekwa ha.
Ebe a nwekwara a egwuregwu ntụrụndụ a na-akpọ Las Berceas nke anyi nwere ike ichota ebe ichikota, ebe ahihia, ime ulo eji asa aru, ime ulo ndi agbanwe agbanwe na onodu ogwugwo, maka odachi.
N'adịghị ka ikpe gara aga, ntinye n'ime ọdọ mmiri a ma ọ bụrụ na ị nwere costeKpọmkwem, ha bụ euro 5,50 kwa isi n'oge ụbọchị azụmahịa yana euro 6,50 na ngwụsị izu na ezumike. Undermụaka nọ n'okpuru afọ iri na anọ yana ndị gaferela 14 ga-akwụ naanị euro 65. Ya oge usoro Ọ bụ site na 10 nke ụtụtụ ruo 10 n'abalị ma ha mepee ruo August 31.
Apiti nke San Juan
Apiti mmiri a bụ nnọọ a kpochapụwo n'etiti Madrid, ma ndị obodo ma ndị ọbịa nọ n'oge okpomọkụ na obodo Spanish. Nke a dị kilomita 70 site na Madrid, n'etiti San Martín de Valdeiglesias, El Tiemblo, Cebreros na Pelayos de la Presa ma nwee ngụkọta nke 14 kilomita mmiri iji banye n'ime ya.
Ọ bụghị naanị na a na-anabata ịsa ahụ kpamkpam mana ị nwekwara ike ịme ụfọdụ ọdụ ụgbọ mmiri. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ihe na-echegbu gị bụ na mpaghara ndị a abụghị nanị na nke ndị na-asacha mmiri (n'ihi na ị na-eso ụmụaka pere mpe) ịkwesighi ichegbu onwe gị, ebe ọ bụ na ha dị iche iche. N'ezie, ị ga-elebara ụmụntakịrị anya nke ọma ebe ọ bụ na apịtị nwere ebe iru ruo mita iri asaa n’ime ya.
O nwere obere mpaghara ịnọnyere akwa nhicha ahụ na akụrụngwa ime ụlọ ịwụ ndị ọzọ, yabụ anyị na-atụ aro ka ị na-aga n'oge n'oge ụbọchị kachasị ewu ewu, ebe ọ bụ na ọ na-ejupụta na ị nwere ike ị gaghị ahụ ebe. Na mgbakwunye, na ụfọdụ ihe ndị ọzọ dịpụrụ adịpụ ị nwere ike ịnụ ụtọ a nudist mpaghara.
Ọdọ mmiri Riosequillo
N'agbanyeghị aha, ọdọ mmiri a nwere mmiri na ọtụtụ ... Ọ bụ kpọmkwem na Buitrago de Lozoya y otu n'ime ndị kasị ibu na Madrid. Ọ na - enweta aha Riosequillo n'ihi na ọ na - enweta mmiri site na esite na - ebu otu aha.
Un mmiri oyi site na gburugburu 4.500 square mita ma jiri chlorine mesoo ya, mana mara ezigbo mma na kristal doro anya. Ọ bụ otu n'ime ọdọ mmiri zuru oke anyị nwere ike ịchọta n'ihi na ọ nwere ogige nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya zuru ike na picnic, ụlọ mposi, ụlọ na-agbanwe agbanwe, ebe mmanya n'akụkụ osimiri, ụlọ ikpe futsal na ọbụna otu n'ime basketball. Anyị nwekwara ike ịnwe oke egwuregwu egwuregwu ụmụaka. Ike ya dị ihe dị ka mmadụ 2.000 n'ihi ya, ọ na-anabata ọtụtụ mmadụ.
Ofbọchị apertura: Site na June 25 ruo August 28
Ebe ebe nzuko: okporo uzo Madrid-Irún, kilomita 74
Nhazi Oge mmeghe: Mọnde ruo Fraịdee site na 11:30 nke ụtụtụ ruo 20:30 elekere. Satọde, Sọnde na ezumike site na 11: 00 n'ụtụtụ ruo 21: 00 elekere.
Ha na-emechi na Mọnde ọ bụghị na ezumike na Tuesday na-esote ezumike na Mọnde.
na tiketi maka ụmụaka bụ 2 euro na ndị okenye 3 euro na ụbọchị izu na 3,50 euro na ngwụsị izu.
No gakwaghị enwe ngọpụ ka ị ghara ịga otu n'ime ndị a ọdọ mmiri dị na Madrid na mberede ... Ha abụghị ụsọ osimiri, kama maka okpomọkụ, dị ka a ga - asị na ha bụ! You maara ọdọ mmiri ọ bụla dị na Madrid nke anyị na-ekwughị banyere ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Mmiri ọdọ mmiri dị nso na Madrid
5 omimi ebe ke Paris